Karim Benzema, Ramos, Valverde Iyo Xiddigaha Laf-dhabarta Ah Ee Real Madrid Ka Maqnaanaya Kulanka Muhiimka Ah Ee Inter Milan – Laacibnet.net
Karim Benzema, Ramos, Valverde Iyo Xiddigaha Laf-dhabarta Ah Ee Real Madrid Ka Maqnaanaya Kulanka Muhiimka Ah Ee Inter Milan
Real Madrid ayaa rajaynaysay inuu Karim Benzema kusoo laaban doono tababarkii Axadda maanta ee ay iskugu diyaarinayeen ciyaarta muhiimka u ah ee Inter Milan ay martida ugu noqon doonaan Arbacada soo aaddan, laakiin weeraryahanka reer France ayaan wali kasoo xaadirin tababarka.
Benzema oo dhaawac ku seegay kulankii barbarraha ay Real Madrid la gashay Villarreal Sabtidii shalay, ayaan wali taam ka noqonin jugo ka gaadhay muruqa, waxaanu mar kale dibedda ka joogay tababarka ciyaartoyda kooxdu iskugu diyaarinayeen kulanka Inter Milan.
Karim Benzema ayaa meel gooni ah ku samaynayay jimicsiyo fudud, waxaana aan loo ogolaanin inuu ciyaartoyda kale soo dhex-galo maadaama aanu taam ahayn.
Sida uu qoray wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka Spain, Benzme ayaa isku dayaya inuu kusoo laabto kooxdiisa ka hor kulanka Inter laakiin hadda rajada ayaa sii yaraanaysa maadaama laba maalmood oo kali ahi ay ka hadhsan yihiin ciyaartaas oo ay u baahan yihiin inay guul ka keenaan.
Filashii Zidane ee ahayd in Benzema uu soo laaban doono maadaama uu Luka Jovic ku dhacay Korona Fayras oo aan usbuucan lagu xisaabtami doonin, ayuu wargeysku sheegay inay tahay gabaabsi oo ay u badan tahay.
Warku wuxuu intaa ku daray in subaxnimada Isniinta ay warka ugu dambeeya heli doonto Real Madrid, kaas oo haddii uu si buuxda u samayn kari waayo Karim Benzema ay ka dhignaan doonto inuu seegayo ciyaarta Stadio Giuseppe Meazza.
Dhinaca kale, Real Madrid ayaa waxa ka maqan kabtankeeda Sergio Ramos oo aan talada lagu darsan doonin kulankan kaddib dhaawac uu muddo bil ku dhow ku maqnaanayo oo kasoo gaadhay kulamadii caalamiga ahaa. Laacibka khadka dhexe ee Fede Valverde ayaa isaguna maqan, halka Casemiro oo kulankii Champions League ee Inter Milan ee November 3 ay garoomada ugu dambaysay uu mar kale seegay ciyaartii Villarreal, balse la filayo inuu taam u noqonayo kulanka Arbacada.